China lovia fisakafoanana vita amin'ny laonim-bary tsy azo ovaina fitoeran-tsakafo maka ny boaty sy ny mpamatsy | PAPER azo antoka
Kitapo fihinana sakafo vita amin'ny laoniny tsy azo ovaina vita amin'ny latabatra esory ny boaty
Sariaka amin'ny tontolo iainana, zezika (90 andro)
Azo antoka ny vata fampangatsiahana, azo antoka ny lafaoro ary ny microwave
Fanoherana rano, fanoherana menaka. anti-static
Mandraisa anjara amin'ny fiainana maitso, misy vokatra avo lenta
Hevitra fahalalana: inona ny compostable?
Araka ny fenitry ny ASTM (American Society for Testing and Materials). ny vokatra azo zezika dia tsy maintsy mahay mamaky gazy karbonika, rano ary biomassa. Tsy tokony hamokatra poizina misy poizina izy ireo mandritra ny fizotran'ny zezika ary tsy maintsy afaka mamelona ny zavamaniry. Maitso izy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Ny vokatra pulp namboarina dia ny compostable trano sy indostria nohamarinin'ny BPI (US), TUV Austria (EU) ary ABA (Australia / New Zealand). Ny fahombiazan'ny karbaona ambany amin'ny fonosana pulp dia sariaka amin'ny tontolo iainana.
Mifantoha amin'ny fonosana sariaka amin'ny tontolo iainana
TRANO HOTELA ARY misakafo
MANDEHA MIVAVAKA & MANARAKA
FANOHANANA TEMP avo sy ambany
VOKATRA DEGRADABLE TANTERAKA
Sariaka amin'ny tontolo iainana, simba ao anatin'ny 90 andro
SURE PAPER dia manome vahaolana isan-karazany momba ny tontolo iainana miaraka amin'ny serivisy sy vokatra avo lenta
HANDEVITRA- MANDEHA CONTAINERS SERIES
PRODUCT Vaovao-fitoeram-wonton pulp
Ireo kaontenera wonton roa dia azo ampiasaina hitazomana endrika wonton sy dumplings isan-karazany. Ny famolavolana efitrano famoronana dia mety amin'ny endrika wonton. Ny sarom-baravarankely concave dia afaka manamboatra ny sakafo ao anaty kaontenera ary mitazona azy tsy hihetsika mba hitazomana ny fampisehoana sakafo tonga lafatra.
Fantsom-bokatra misy fantsom-panolorana-Manolotra karazana opération d'exploitation enina miaraka amin'ny habe enina. Mora ny maka sy mandeha ny famolavolana «locking butterfly» manavao, ary azo antoka ny fampisehoana amin'ny fitaterana azo antoka, izay mifanaraka amin'ny filan'ny sakafo aleha sy ny tsenan'ny sakafo aterina.
TANDEVITRA- SERIASA BOWL
Vokatra vaovao - vilia baolina mihoam-bolo: mety tsara alaina
Ity kaontenera miendrika oval ity dia mety indrindra ho an'ireo mpivarotra sakafo sy mpikarakara sakafo manolotra safidy azo alain-tahaka toy ny paty, paty, ny curry, ny burrito, ny salady. Habe roa (620ml & 770ml) no ilaina amin'ny filanao. Izy io dia tonga lafatra ao anaty harona taratasy halaina. Ity famolavolana vokatra vaovao ity dia manome ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa: ny fahafaham-po sy ny faharetana farany ho an'ny sakafo eo an-toerana.
ANDIAN-DAHATSORATRA ETO AN-TRANO sy TRANO
SERIAM-pamokarana PULP hafa
Ny hatsiaka mankany amin'ny fonosana hafanana mahery (FHHP) dia mety amin'ny fampiharana mangatsiaka amin'ny hafanana avo. Avy amin'ny fomula fanavaozana antsika no ahafahantsika mahatsapa ho "FANAFODY IRAY" rojo famatsiana sakafo. Ary koa, manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny famonosana izy io, mba hialana amin'ny fitaovana artifisialy, hahatratrarana ny fahombiazana avo sy ny vidiny ambany.
Na dia efa misy maodely an-jatony aza ao amin'ny orinasanay, dia mbola miarahaba ny famokarana ny varotra latabatra pulp mifanaraka amin'ny volavolanao, ny habeny sy ny sary famantarana.
Andao hiezaka ny hanao ny tanindrazantsika ho maitso sy ho tsara kokoa.
Teo aloha: Mpivarotra ambongadiny any Sina OEM Custom Custom disposable Logo Printed Single Wall Blank Paper Coffee Cups 8 Oz
Manaraka: 100% Original Factory China Bulk Paper Ningbo Fold Fbb C1s Ivory Board
kianja lovia kitapo
lovia fitoeran'entana boribory bagasse
lovia salady bagasse
lovia mitongilana bagasse
fitoeran-drano hanaporofoana rano any anaty ala
fitoeram-bola azo atsofoka sakafo
takelaka bagasse fary azo ovaina
IOS Certificate China Custom Logo Sakafo Sakafo Bu ...
2019 China New Design China C1s mifono Ivory Bo ...
Kalitao avo ho an'ny China Single Wall Disposable P ...
Vidiny mety China 210GSM 230GSM 250GSM 270 ...
Orinasa mora vidy mafana China Ningbo APP Fold Board / I ...
Factory namboarina China Nevia Brand Double Sid ...